ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ဘလော့ဂ်သို့အသွားအလာတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်ရိုးရှင်းသောအပြောင်းအလဲ ၅ ချက် - Nicheonlinetraffic
အိုကေ, သင်ပြီးသားအမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်, သက်ဆိုင်ရာကြောင်းကိုကြယ်သောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝြေခင်းစတင်ခဲ့နှင့်မျှဝေဖို့ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ဧည့်သည်ကောင်းတစ်ခုအရေအတွက်ကရယူသည်မဟုတ်ခဲ့ကြပုံရသည်။ သင်ပင်သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာမှန်မှန်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာပို့စ်တင်နေကြပေမယ့်အသွားအလာအမှန်တကယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်။
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ဒီအားလုံးဘလော့ဂါများမှတွေ့ကြုံတတ်၏။ သင်ပင်စဉ်းစားရန်ကိုစတင်ရန်စခွေငျးငှါ: ငါအကောင်းတစ်ဘလော့ဂါ Am? ငါ့အဘို့အကျိုးအမြတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း blogging သလဲ? ကောင်းပြီ, သင်ကောင်းတစ်ဦးဘလော့ဂါနိုင်ပါတယ်။
ဒါကပြဿနာဘလော့ဂ်နှင့်အတူမစျသောကွောငျ့, ကသငျသညျ Blog သို့သှားရာလမျးနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စာဖတ်သူတွေ၏အကျိုးစီးပွားများအားလုံးဒေသများအာရုံစိုက်သို့မဟုတ်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်လုံလောက်ပြည့်စုံသောမဖွစျနိုငျသညျ။ အာရုံ၏အချို့အပြောင်းအလဲသို့မဟုတ်ဒေသများသည်သင်၏ဘလော့ဂ်အားထုတ်မှုပြည့်စုံစေကဒီမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘလော့ရဲ့ Loading အချိန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
မည်သည့် page ည့်သည်ကိုမဆို ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုတင်ချိန်ကိုမေးပါ။ အဖြေသည်ချက်ချင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ ဒါဟာဘလော့ဂါတွေအချိန်မရွေးဖြည့်ဆည်းပေးသင့်တဲ့ obvious ည့်သည်တစ်ယောက်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ပဲ။ ဂူဂဲလ်တောင်မှကွန်ရက်စာမျက်နှာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်တခုခုကိုအဆင့်သတ်မှတ်နေစဉ်တင်ရန်အချိန်ကိုစဉ်းစားသည်။
သုတေသနနှုန်းအဖြစ်, ဧည့်သည်၏နီးပါး 50% နှစ်ခုစက္ကန့်အတွင်းကို load တစ်ခုက Web page ချင်တယ်။ ဒီတော့အဲဒီလိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တင်သေချာစေရန်, သင် Plugins ရဲ့အရေအတွက်ကလျှော့ချထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့မဟုတ် add-ons တွေကိုသင့်ပါတယ်။ တစ်စမတ်ပြောင်းရွှေ့အဖြစ်, သင်ထားတဲ့ All-In-One plugin ကို အသုံးပြု. ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါ။
ထို့နောက်ချုံ့ tools တွေသုံးပြီးပုံရိပ်ကိုအရွယ်အစားလျှော့ချပေးပါတယ်။ သင်ပင်သာဖြစ်သောဧည့်သည်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ကျသွားတဲ့အခါမှာအဖြစ်အခွအေနေပျေါမှာပုံရိပ်တစ်ခု load နိုင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုနှုန်းအဖြစ်, ဘလော့ဂ်ပို့စ်များအပေါ်ခလုတ်မျှဝေလူမှုမီဒီယာခုနစ်ကြိမ်အားဖြင့်ပို့စ်များကို၏လူကြိုက်များတိုးမြှင့်ဖို့များပါတယ်။ တစ်ဦးဧည့်သည်ခလုတ်ကိုကလစ်အရေးယူမှုဖြစ်ပေါ်စေရန်, မှတ်မိလွယ်တဲ့နှင့်တိုတောင်းသောခေါင်းစဉ်ရှိခြင်းနှင့် hashtags ကိုအပါအဝင်စဉ်းစားပါ။
အားလုံးပြီးနောက် Facebook ကို hashtags ကိုလူကြိုက်များဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင့်ရဲ့ပို့စ်များကိုယခုလျင်မြန်စွာပိုပြီးအသွားအလာနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘလော့တခုတခုအပေါ်မှာ Active ကိုဖိုရမ် Initiate
သင့်ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်အသစ်အသွားအလာကိုဆွဲဆောင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် tool ကိုများအတွက်ဘယ်ချိန်မဆိုအသုံးဝင်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ရေးပလက်ဖောင်း: တက်ကြွဖိုရမ်မှနှစ်ဆအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျ၎င်းငျး၏ content ထဲကိုသဘာဝရှည်လျားသောအမြီးသော့ချက်စာလုံးများပါဝင်သည်တဲ့အခါမှာအဆုံးစွန်သောလျင်မြန်စွာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရုံရှာဖွေရေးထားသောစာပိုဒ်တိုများ, 'keyword ကို + forum ကို' 'ကို အသုံးပြု. သင်၏အနယ်ပယ်များတွင်အချို့သောနာမည်ကြီးဖိုရမ်များရှာဖွေနေခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ထို့နောက်တစ်ဦးအမည်ပြောင်အဖြစ်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြု. တွေ့ရှိခဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်တက်ကြွဖိုရမ်မှအပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့အကောင့်ဖန်တီးပါ။
ဒါပဲ! အခုတော့အဲဒီဖိုရမ်များအထောက်အကူပြုနှင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖိုရမ်တစ်ခု start ရှေ့တော်၌အကဲဖြတ်ရန်။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ဖိုရမ်တစ်ခုလုပ်ဖို့, သင် WordPress ကိုထံမှထိုကဲ့သို့သော bbPress အဖြစ်အချို့သောအခမဲ့ plugins ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပိုပြီးအသွားအလာကိုပိုအမြတ်အစွန်းကိုဆိုလိုသည်အဖြစ်ယနေ့ခေတ်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှငွေဝင်, ခေတ်မှီခြင်းနှင့်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်စဉ်းစားသင့် အရည်အသွေးအအသွားအလာကိုဝယ် ထိုကဲ့သို့သော Facebook က, AdWords အ, Google Reddit နှင့်အခြားထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအဖြစ်ရင်းမြစ်များမှ။ သငျသညျဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာ၏တစ်ရက်ကဲ့သို့ကြီးမားသောဘတ်ဂျက်ရှိပါကသို့သော်ထိုပလက်ဖောင်းကနေအသွားအလာဝယ်ယူသာတကယ်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျမဟုတ်ရင်နားထောင်မည်အကြောင်း, သို့သော်ဤအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်။
အခုအချိန်မှာအတော်များများဘလော့ဂါများအသွားအလာကိုဝယ်ကြလော့။ ကစျေးနှုန်းချိုသာသဘောတူညီမှုစေရန်, တစ်ဦး retargeted technique ကိုအကောင်အထည်ဖော်စဉ်းစားပါ။
ကောင်းပြီ, ဘာမျှမှတ်ချက်အဖြစ် post ကိုတုံ့ပြန်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်နှင့်သင့်ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် website ကိုမှအသွားအလာကိုမောင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းပိုမြန် indexing, အခမဲ့ nofollow website ရဲ့ backlink နှင့်အသစ်သောဘလော့ဂါများနှင့်အတူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချဆက်ဆံရေးမျိုးရရှိရန်။
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် bot တွေဟာယခုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Blog ကိုသို့မဟုတ်ထို site ကိုပိုမိုလင့်များရနိုင်သကဲ့သို့, သူတို့ကတော်တော်လေးပိုမြန်အတူတူတွားနှင့်အညွှန်းကိန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသွားအလာရရန်အချိန်ကြာမြင့်နေချိန်တွင်မှတ်ချက်နေဆဲထိရောက်သောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ရုံသငျသညျကိုစပမ်မအာမခံပါသည်။ ရိုးရှင်းစွာအ '' ကောင်းသော post 'အဖြစ်မှတ်ချက်ပေးသို့မဟုတ်' ငါသဘောတူ '' အဘယ်သူမျှမတနျဖိုးကထပ်ပြောသည်နှင့်အစားသင့်ရဲ့ traffic ကို drop ဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ Das နှင့် Alexa ရာထူး၏အိပ်မက်မှဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အဘို့, သင်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ပိုပြီးဧည့်သည်ကိုလက်ခံရရှိစေရန်များစွာသောအမှုအရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအပြောင်းအလဲကြိုးစားပါနှင့်ငါတို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဝေမျှ!